သတင်း - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်၏ နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စောင့်ရှောက်မှု
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်သည် မြင့်မားသောနည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှုကို စုပ်ယူမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တီထွင်ထားသော မြန်နှုန်းမြင့် အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို PLC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ အကြိမ်ရေနှစ်ထပ်ပြောင်းသည့်ကိရိယာ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ စက္ကူအစာကျွေးခြင်း၊ အိတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် နှစ်ထပ်ကုဒ်အီလက်ထရွန်းနစ်သွေးခုန်နှုန်းကို လက်ခံပါသည်။အိတ်အရှည်ကို ချက်ခြင်းဖြတ်နိုင်ပြီး အရောင်ကုဒ်ခြေရာခံခြင်းမရှိဘဲ ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး အဆင့်တစ်ဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ဖလင်ကို ပြောင်းလဲပြီးနောက်၊ ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများသည် အမျိုးသားအရောင်ကုဒ်ကို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ဘဲ အိတ်ကို ဖြုန်းတီးပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ဖလင်ပြောင်းပြီးနောက် အိတ်အလွတ်များကို ရှောင်ရှားရန် ထုပ်ပိုးအိတ်တစ်လုံးတည်းကိုသာ အရောင်ကုဒ်ဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ဘက်စုံသုံးထုပ်ပိုးသည့်စက်သည် မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုရှိပြီး ၎င်းကို လည်ပတ်ရန်အတွက် လူလေးဦးသာ လုပ်အားကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးနိုင်သည်။GMP ထုတ်လုပ်မှု စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး အစုလိုက် ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုပ်ပိုးသည့်စက်တွင် မြင့်မားသောအဆင့်၊ လုပ်သားချွေတာမှုအရှိဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုပ်ပိုးသည့်စက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတွင် အလွန်မြင့်မားသော ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှုရှိသော ထိန်းချုပ်ယူနစ်ကို ဖွဲ့စည်းရန် ဆာဗာမော်တာ၊ ဆာဗာဒရိုက်ဗာနှင့် အရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တို့ ပါဝင်သည်။ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ကန့်သတ်ဘောင်အားလုံးကို သတ်မှတ်ရန်နှင့် လော့ခ်ချရန် လွယ်ကူစေသည်။အိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း အရှည်နှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အပူချိန် ကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပို၍ လိုက်လျောညီထွေ ရှိသည်။ဆာဗိုစနစ်သည် သမားရိုးကျစက်မှုရုပ်ရှင်အစာကျွေးသည့်စနစ်အား အစားထိုးပြီး၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကို ရိုးရှင်းစေကာ ထုပ်ပိုးစက်၏လည်ပတ်မှုကို ပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်၊ နေ့စဥ်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ရိုးရှင်းသည်၊ အော်ပရေတာအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးကာ ဆူညံသံနှင့် ချို့ယွင်းမှုကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။ စက်လည်ပတ်မှုနှုန်း။ဒါဟာသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ပါတယ်;အသုံးပြုသူသည် control panel တွင်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များ၏ထုပ်ပိုးမှု parameters များကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ memory မှသက်ဆိုင်ရာဒေတာကိုခေါ်ဆိုပြီး၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်သာလိုအပ်ပြီးထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
1. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အလုံးစုံဒီဇိုင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး ချိန်ညှိရန် လွယ်ကူသည်။
2. အလျားလိုက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ပိုမိုတည်ငြိမ်၊ ခိုင်ခံ့ပြီး တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် အပိတ်အလျားလိုက် အလုံပိတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုထားသည်။
3. မြန်နှုန်းမြင့် အလျားလိုက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ကိရိယာ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်း၊ ကြည်လင်ပြီး လှပသော reticulation။
4. အလိုအလျောက်နေရာချထားခြင်းနှင့် ကားပါကင်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် (ပူသောဖလင်ကိုကာကွယ်ရန်)။
5. အထူးထုတ်ကုန်များသည် ထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းသော clutch ကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ထုပ်ပိုးသည့်စက်အား ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနေရာချထားမှုအရ အလျားလိုက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးသည့်စက်များနှင့် ဒေါင်လိုက်လေဟာနယ်ထုတ်ပိုးသည့်စက်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။အလျားလိုက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးသည့်စက်၏ ထုပ်ပိုးထားသော အရာဝတ္ထုကို အလျားလိုက်ချထားသည်၊ဒေါင်လိုက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးသည့်စက်၏ ထုပ်ပိုးထားသော အရာဝတ္ထုကို ဒေါင်လိုက်ချထားသည်။အလျားလိုက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးသည့် စက်များသည် ဈေးကွက်တွင် ပို၍ အသုံးများသည်။